Unyaka omkhulu weGoogle Chrome - Geofumadas
NgoJuni, 2012 Internet kunye neBlogs
Imeko kaGoogle Chrome ngumzekelo othusayo wento ebithethwa kwiminyaka emi-4 eyadlulayo: «Isikhangeli esifuna ukuba yinkqubo yokusebenza»
Ndiyakhumbula ngoSeptemba ka-2008 ndibhale malunga nendlela I-Google iqalise isiphequluli sayo, xa ukulindela ukuhlawula i-Intanethi Explorer ibonakale iphosa njengokuba ucinga ngoku ukuba iOS iza kunqoba iWindows kwiminyaka emithathu ezayo. Igrafu yangaphambili ibonisa ukuba i-IE ibe ne-71%, i-Firefox 26% kunye nabanye bahlala emgceni ngaphandle kokugqithisa i-2%.
Iinyanga ze-30 kamva, nje nje ngonyaka owanduleyo ndabuyela kwisihloko, kunye nento Iinyanga ze-Google Chrome 30 kamva, ukusebenzisa amanani ebonisa ukuba i-Chrome ibekwe ngaphaya kwe23% ngelixa i-Firefox ifinyelele kwi-29% kunye ne-Intanethi Explorer yawa ngokukhawuleza kwi-44%.
Kodwa unyaka odlulileyo uye wabonisa ukuba ndiphosakele, nangona ndacinga ukuba lo mshicileli uya kudlula bobabini, akuzange kwenzeke kum ukuba ndikwazi ukwenza ngaphantsi kweenyanga ezilandelayo ze-12. Jonga ukuba iinkcukacha zeentsuku ze-30 zokugqibela zenza i-Chrome ibe kwi-39%, i-Internet Explorer kwi-31% kunye ne-Firefox kwi-23%. Loo nto ibonisa ukuba isikhangeli likwazile ukuthatha zombini abasebenzisi, kodwa utsalela ingqalelo Safari ukukhula efikelela ukusondela 4% kwi umdla ngexesha elinye Bulelani ua mobile.
Umonakalo omkhulu kakhulu awukho nje i-Internet Explorer kodwa kwakhona i-Windows kunye ne-Ofisi njengokuba kukho ukukhula akukona nje ngenxa yokuhamba kodwa ukuhlanganiswa kweenkonzo ezinxulumene nazo ngoku ezikwenziwa kwi-Chrome kwizinto ezilula ezifana:
Yakha i-Word / Excel document ngokubambisana. Sifumana oku ngeCartesia kunye noGabrielOrtiz ekuhleleni umzekelo weZ! Izikhala kwaye ndimele ndivume ukuba bekungeke kwenzeke kumdala usebenzise iMicrosoft Word.
Le veki i-Google ikhishwe inguqulo yayo ye-iPad / iPhone, kwaye nangona iyinto ebomvu, ndiya kuyisebenzisa ngaphezu kwe-Safari. Akusekho ngamandla kodwa ngoqhelwano, uqaphela ukuba ukungaphumeleli kwangoku kuya kusombulula kwiiveki ezimbini. Ndiyakhumbula ukuba kwakukho iqhosha le-iPad elibizwa ngeChromy, elifanele liguqule igama layo kamva ngenxa yengozi yeGoogle yokubagxeka -Akunokwenza ikopi okanye ukusebenzisa igama lakhe kodwa ukusetyenziswa kakubi ngokungahambi kwakhe kwemvelo-.
Mhlawumbi umzekelo ndikhankanya ngeGoogle Amadokhumenti uyazibamba, kodwa kungekudala okanye kamva siya kubona ukuba amaxesha atshintsha ngendlela ekhawulezayo; asisayi kuhlala sisistim somsebenzi xa sinokuthi senziwe kwifu -kunye nemfundo yeselula- Kwaye ngeli desktop iiPC ziya kuqhubeka esebenzisa nokuthengisa, oku kuqikelelwa ukuba kunyaka ozayo iipilisi ngaphezu iiPC. Ngokuthe ngcembe siya siqhelane ukuba zigxininise cwecwe leyo elalithetha ajenda ezonakalayo wathengisa iinyanga ezilishumi elinambini, 6 zokubhalela IYunivesithi engonakaliyo emithathu, i-imeyile ye-elektroniki, incwadi yokudweba, isichazili, umdlali womculo, uluhlu lokuthenga ivenkile, ikhamera ...
Nangona na ukungaphatheki zam ne Google, hayi nje kuba ingaba yinto Microsoft elandelayo kodwa kuba kusenokuba embi, Ndimele ndivume ukuba umnqwazi ubuncinane ezine iimveliso zayo ngazo ndiye ndakwazi ukuba nemveliso ngakumbi:
I-Google Earth / Maps, apho asenza sicinge ngemephu yendlela ehamba ngayo imihla ngemihla
I-AdSense, apho intengiso ye-intanethi yaba lula
I-Google Amadokhumenti, ngokufikelela lula kumaxwebhu aqhelekileyo asetyenziswayo
Kwaye i-Chrome, njengomzekelo wemveliso onokuyiphumelela imfazwe engaphantsi kweminyaka eyi-4.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ixabiso qhinga ulwazi indawo
Post Next umbono elicingelwayo kunye necandelo ngokusika AutoCAD 2013Okulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "Unyaka omkhulu weGoogle Chrome"
Makhe sibone indlela iGoogle eyenziwa ngayo kunye ne-Plus, abazange baphumelele kwisihloko sezonxibelelwano zentlalo.
Kwaye i-Google Plus isele ikhangele i facebook! yibambe njalo